သင်တစ်ဦးပြောဆိုချက်ကိုဖွင့်လှစ်ဖို့ရည်ရွယ်ခဲ့လျှင်, သင်ငှားရမ်း၏အဆုံးကနေ 24 နာရီအတွင်း support@rentacarclub.com အီးမေးလ်ပေးပို့ခြင်း, RentaCar Club မှပြဿနာကိုသတင်းပို့, လူအပေါင်းတို့မဖြစ်မနေစာရွက်စာတမ်းများများကိုရှိသည်:
ပိုင်ရှင်နှင့်ငှားရမ်းနှစ်ဦးစလုံးကလက်မှတ်ရေးထိုး Pick-up ကိုငှားရမ်းသဘောတူညီချက်;
အရေးဆိုမှုအမျိုးအစား (e.g .: ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုနှောင်းပိုင်းပြန်လာ, ပြစ်ဒဏ်တာဝန်ခံသတိပေးချက်များ ... ) ပေါ် မူတည်. RentaCar Club အချို့တိကျသောစာရွက်စာတမ်းများလိုအပ်ပါသည်။ ဤရွေ့ကားစာရွက်စာတမ်းများအထောက်အထားအဖြစ်အသုံးပြုမည်ဖြစ်ပြီးအဆိုပါပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုသို့မဟုတ်အပိုစွဲချက်များအတွက်တာဝန်ရှိသည်သူသည်ကိုဆုံးဖြတ်ရန်နိုင်ဖြစ်ခြင်း၌အကြှနျုပျတို့၏အဖွဲ့သည်အထောက်အကူပြုပါလိမ့်မယ်။
အရေးကြီး: တစ်ဦးပြောဆိုချက်ကိုဖွင့်လှစ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်တခါ, သငျသညျ5စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရက်အတွင်းအပေါငျးတို့သမေတ္တာရပ်ခံသက်သေအထောက်အထားများနှင့် / သို့မဟုတ်စာပေးစာယူနှင့်အတူကျွန်တော်တို့ကိုပေးဖို့ရှိသည်။ အဲဒီလိုလုပ်ဖို့ပျက်ကွက်ခြင်း, အရေးဆိုမှု၏ဆုတ်ခွာအဖြစ်နားလည်သဘောပေါက်ပါလိမ့်မည်။